အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီ သို့ခြေလှမ်းစတင်ခြင်း – အပိုင်း (၂) | Curiosity Science Magazine
August 14, 2016 · by Thaw Zin Htun	· in Physical Science.	·
အပိုင်း (၁) ကို အောက်ပါ Link မှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ် ။
အထူးရီလေတီဗတီသီအိုရီ (The Special Theory of Relativity)
အထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ (Special Relativity Theory) ရဲ့အဓိက အခြေခံအချက်နှစ်ချက်ကတော့ (၁) ရူပဗေဒ ရဲ့ နိယာမတွေ ဟာ ဘယ်အခြေအနေ မှာပဲရောက်နေရောက်နေ တစ်သမတ် ထဲ မပြောင်းမလဲရှိနေရမယ် ၊ (၂) အလင်းရဲ့ အလျှင်ဟာ ဘယ်သူ့ အတွက်မဆို ဘယ်လိုတိုင်းတိုင်း (မှန်မှန်ကန်ကန် နည်းစနစ်ကျကျ တော့တိုင်းပေါ့နော်) တသတ်မတ် ထဲ ကိန်းသေတစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေရမယ် ။ Newton တင်မက Maxwell ရဲ့အလင်းဆိုင်ရာ သီအိုရီပါ ထည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ သီအိုရီ လေး ဟာ ကြည့်ရင်သာရိုးရှင်းပြီး ဘာမှမဟုတ်ဘူး ထင်ရပေမဲ့ တကယ်က အရမ်းကို အသုံးဝင် တဲ့ သီအိုရီဖြစ်ပါတယ်။ Einstein ဟာ ဒြပ်ထုတည်မြဲမှု နိယာမ ( Law of Conservation of Mass) နဲ့ စွမ်းအင်တည်မြဲမှု နိယာမ ( Law of Conservation of Energy ) နှစ်ခုကိုလဲပေါင်းစပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒြပ်ထု ဟာလဲ စွမ်းအင် ကိုပြောင်းလဲနိုင်သလို စွမ်းအင် ဟာ လဲ ဒြပ်ထုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါဟာ အထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို အခြေခံထားတဲ့ သဘောတရားပါ ။ အထူးကျော်ကြားလှတဲ့ E=mc2 ဆိုတဲ့ ညီမျှခြင်း (E=energy, m=mass, c=speed of light in vacuum=3x 10^8 m/s) မည်သည့်အရာကမျှ အလင်းထက်ပိုမြန်မြန်မသွားလာနိုင် (Thou shalt not travel faster than light) ဆိုတဲ့ နိယာမ ၊ အလျှင်ကြောင့် အချိန်ပြောင်းလဲခြင်း တို့ ဟာ အထူးရီလေတီဗဒီ သီအိုရီ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တွေ ပဲပေါ့ ။ ဘာလို့အလင်းထက် မြန်မြန်မသွားနိုင်တာလဲကတော့ ရှင်းပါတယ် ။ E=mc^2 အရ စွမ်းအင် နဲ့ဒြပ်ထုမှာ တိကျတဲ့ ညီမျှချက်တစ်ခုရှိပါတယ် ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခု ဟာ အရှိန်များများနဲ့ သွားလေ သူ့ ရဲ့ဒြပ်ထု ဟာ ပိုပိုကြီးလာပါတယ် ။ ဒါ ဟာ သာမန်ကျွန်တော်တို့ နေ့ စဉ် သွားလာနေတဲ့ကား ၊ အဆုံးစွန်ဆုံး ဆိုရရင် အသံထက်မြန်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျက်လေယဉ်တွေမှာတောင် ဘာမှမသိသာပါဘူး ။ ခင်ဗျားဟာ အလင်းအလျှင်ရဲ့၁၀% (ဆယ်ပုံတစ်ပုံဆိုတာ မနဲဘူးနော် ..3x 10^7 m/s ရှိတယ် ။ အမြန်ဆုံး Jet လေယာဉ်တောင် 2020.6 m/s ပဲသွားနိုင်သေးတယ် ။ အမြန်ဆုံး ဂျက်လေယာဉ်ထက် အစပေါင်း တစ်သောင်းခွဲ နီးပါး ပိုမြန်တယ် ။ ) နဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား ဒြပ်ထုရဲ့ဝ.၅ % သာ တိုးလာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့အလင်းအလျှင်ရဲ့ ၉၀% နဲ့ ခရီးသွားမယ်ဆို၇င်တော့ ခင်ဗျား ရဲ့ ဒြပ်ထု ဟာ နှစ်ဆ တိုးလာမှာပါ ။ တိုးလာတာ ဟာ တသတ်မတ် တိုးတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ၉၀ % အကျော်မှာ ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားရဲ့ ဒြပ်ထု ဟာ တစ်ရှိန်ထိုးကြီး ကို တက်လာပါပြီ ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အလင်းရဲ့ အလျှင်နားနီးကပ်လာလေ တိုးလာလေ၊ စွမ်းအင်လဲပိုများများလိုလာလေလေဖြစ်ပါတယ် ။ (ဒြပ်ထုကြီးတင်တိုးလို့ မရပါဘူး ၊ စွမ်းအင်ပါလိုက်တိုးရပါတယ် ၊ ဒါမှသာ စွမ်းအင်-ဒြပ်ထု တည်မြဲခြင်းဥပဒေသ နဲ့ ကိုက်ညီမှာဖြစ်ပါတယ် ) ဖြစ်ပြီး အလင်းရဲ့ အလျှင်နဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ ခင်ဗျား ရဲ့ ဒြပ်ထု ဟာ အနန္တ (Infinity) ဖြစ်သွားပါပြီ ။ ဒီလိုအနန္တဒြပ်ထုကိုလိုက်ဖို့ ဆိုတာ အနန္တစွမ်းအင် လိုအပ်ပါတယ် ။ ရူပဗေဒ မှာ အနန္တဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိန်းပါ ။ အနန္တစွမ်းအင် ဆိုတာလဲ မရှိတဲ့အတွက် မည်သည့်ဒြပ်ထုတစ်ခုရှိတဲ့ အရာမဆို အလင်းရဲ့ အလျှင် သို့ မဟုတ် အလင်းရဲ့ အလျှင်ထက်ပိုမြန်ပြီးမသွားနိုင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ အလင်း သို့ မဟုတ် အလင်း ကဲ့သို့ သော ဒြပ်ထုမရှိသော (သို့ မဟုတ်) Intrinsic Mass=0ဖြစ်သော [ Intrinsic mass ဆိုတာ Energy ကိုတည်ပြီး c^2 နဲ့ စားတာပါ ။ Four-dimensional momentum တစ်ခု ဟာ Null Vector ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရာတစ်ခုကို ဒြပ်ထုမရှိသော အရာ လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဥပမာ အလင်းမှုန် (photon) အစုတွေဟာ ဦးတည်ရာတစ်ခုထဲရွေ့ နေခြင်း ၊ အလွယ်အားဖြင့် လျစ်လျူရှုလို့ ရလောက်အောင်သေးငယ်သောအမှုန်များလို့ မှတ်လိုက်ပါ ။ ] အရာများမှသာ အလင်းအလျှင် (c) နဲ့သွားလာနိုင်ပါတယ် ။
အထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ရဲ့ နောက်တစ်ချက်ဟာ ဟင်းလင်းပြင်နဲ့ အချိန်ကိုပေါင်းစဉ်းနိုင်ခဲ့တာပါ ။ လေးဘက်တိုင်းဆိုတာ အတိုင်းလေးခု ရှိတဲ့ ကျတော်တို့ ရဲ့ အာကာသ ပါ ။ အလျား , အနံ , အမြင့် အပြင် Einstein ဟာ အချိန်ကို ပါထဲ့သွင်းပြီး လေးဘက်တိုင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ Aလမ်း န့ဲ Bလမ်း ဆုံ က C tower ရဲ့လေးလွှာ မှာ ညနေ လေးနာရီ တွေ့ ရအောင် လို့ ကျွန်တော် က ပြောလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ။ A လမ်းဆိုတာက x , B လမ်း ဆိုတာက y , လေးလွှာဆိုတာက z ဖြစ်ပြီး ညနေလေးနာရီ ဆိုတာ က တော့ time လို့ ခေါ်တဲ့ အချိန် ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လေးဘက်တိုင်းမှာ x,y,z သည် တည်နေရာ (Space) ကို ဖော်ပြလို့တည်နေရာပြ အတိုင်း များ (Spatial Dimensions) လို့ ခေါ်ပြီး time ကတော့ အချိန်ကို ညွှန်းတဲ့ Dimension ဖြစ်လို့အချိန်ပြအတိုင်း (Time Dimension) လို့ သတ်မှတ်ပါတယ် ။ စုပေါင်းပြီးတော့ Spacetime Dimensions, အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ပြအတိုင်းများ လို့ လဲခေါ်ပါတယ် ။ ( Hyperspace အကြောင်းမှာပြောထားပြီးသားကို အကျဉ်းပြန်ခြုံးပြတာပါ )
ဒီ အထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီရဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပကတိအချိန်(absolute time) အယူအဆ ကို ဖျောက်ပစ်လိုက်တာပါပဲ ။ ပကတိ အချိန် သဘောမရှင်းပြခင် နှိုင်းရ အလျှင် (Relative Velocity) အကြောင်းနဲနဲပြောပြပါရစေ ။ ကားတစ်စီးဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၅၀ နှုန်းနဲ့ သွားနေတယ်ဆိုပါတော့ ။ လမ်းဘေးမှာရပ်နေတဲလူတစ်ယောက် ရဲ့ အမြင်နဲ့ ဆို ဒီကားဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၅၀ သွားနေပါတယ် ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားက နှိုင်းရအလျှင် (Relative Velocity) ဟာ တစ်နာရီမိုင် ၅၀ ပါ ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ကားဘေးမှာပဲ မောင်မောင် ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်က အဲ့ကား ကို တစ်နာရီ မိုင် ၃၀ နှုန်းနဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်နေတယ်ဆိုပါတော့ ။ မောင်မောင်အနေနဲ့ ဆိုရင် ဒီကား ဟာ သူ့ ထက်တစ်နာရီကို မိုင် ၂၀ ပဲပိုမြန်ပါတော့တယ် ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားက နှိုင်းရအလျှင် (Relative Velocity) ဟာ တစ်နာရီမိုင် ၂၀ ပါ ။ (အရှိန် ဟာ Vector ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းလို့ နှုတ်လို့ ရပါတယ် ။ ကားကောဆိုင်ကယ်ကော ကော ဦးတည်ချက်တစ်ခုထဲလို့ ယူဆထားပါ ။ ဦးတည်ချက်မတူလဲ သဘောတရားတူတူပါပဲ ။ တွက်နည်းကွဲပါတယ်။ ကိုးတန်းဆယ်တန်း တုန်းက Vector တွေအပေါင်းအနှုတ်တွေကို မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ် ) ။ ကဲ အဲ့ဒီ ကားနေရာမှာ ကားမဟုတ်ဘဲ အလင်းလို့ တွေးကြည့်ရအောင် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အလင်းနောက်ကို တစ်နာရီ မိုင် ၂၀ နှုန်းနဲ့ သွားလဲ အလင်း ရဲ့ အလျှင်ဟာ မပြောင်းမလဲ သွားနေတုန်းပဲ ။ အလင်း က3x 10^8 m/s နဲ့ သွားလို့ကျွန်တော်တို့ က2x 10^8 m/s နဲ့ လိုက်ရင်လဲ အလင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ ထက်3x 10^8 နဲ့ ပဲဆက်သွားနေပါတယ် ။ (ကိုသာထက်အောင် ရဲ့ Issue2က အချိန်နဲ့ အလျှင်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပိုပြီးအကျယ်တပြန့် ရေးသားထားတာတွေ့ ရပါတယ် ။ ) ဘာလို့ ဆို အလင်းရဲ့ အလျှင်ဟာ ပကတိ (absolute) ဖြစ်လို့ ပါ ။ တခြားအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးမပြောင်းလဲခြင်းကို ပကတိဖြစ်နေတဲ့ သဘောလို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ပကတိဖြစ်နေတဲ့အရာကို ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘာနှိုင်းရအနေနဲ့ မှလိုက်ပြီးပြောင်းလို့ မရပါဘူး။ ခုန ကဆိုရင် မန္တလေးရဲ့ အကွာအဝေး ဟာ ပကတိမဖြစ်ဘူး ။ ဘာလို့ ဆို ဘယ်နေရာကပြောတာလဲဆိုတာအပေါ်မူတည်နေလို့ ပါ ။ အခုအလင်းကတော့ ဘယ်အရာရဲ့ ပေါ်မှာမှ မမှီခို မမူတည်ဘူး ။ ဘယ်တော့မဆို သူ ဟာ တစ်သမှတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ ဟာ ပကတိဖြစ်ပါတယ် ။ Einstein ရဲ့ အထူးရီလီတီဗတီ ဒုတိယ အချက်အရ အလင်းအလျင်ဟာပကတိဖြစ်နေရပါမယ် ။ဒါဆိုဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုသာရှိတော့တယ် ။အလင်းအလျှင်နောက်ကို လိုက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အချိန်ဟာ နှေးသွားလို့ ပါ ။ (Time dilation လို့ ခေါ်ပါတယ်) ဒီနေရာအချိန်ဟာ Newton ယူဆခဲ့သလို ပကတိမဟုတ်တော့ပါဘူး ။ အချိန်သည်ပင်လျှင် အလင်းရဲ့ အလျှင် (ပကတိ) အပေါ်မှာ မူတည်နေတဲ့ နှိုင်းရသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ ။
Newton သီအိုရီ အရ အရင်လိုက်ကြည့်ရအောင် ။ အလင်းတန်းလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ဟာ လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ။ ဘယ်သူမဆို အလင်းသွားဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာ ကို လက်ခံကြမှာပါ ( Newton အတွက် အချိန်ဟာ ပကတိ ဖြစ်တယ် ။ ) ဒါပေမဲ့ အလင်းရဲ့ သွားခဲ့တဲ့ အကွာအဝေး ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူနိုင်တော့ပါဘူး ။ ( ဟင်းလင်းပြင် သည်ပကတိမဟုတ် ) ။ ထို့ ကြောင့် ပကတိမဟုတ်သော ဟင်းလင်းပြင် ကိုတည် ပြီး ပကတိဖြစ်သောအချိန်နှင့် စားထားသော အလျှင် [ အလျှင် (နှိုင်းရ) = အကွာအဝေး (နှိုင်းရ) / အချိန်(ပကတိ) ] သည်လည်းပဲ ပကတိ မဟုတ်သော နှိုင်းရအလျှင်သာဖြစ်ရပါမည် ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီနိုင်ပါ။
Einstein သီအိုရီအရလိုက်ကြည့်၇အောင် ။ အလင်းတန်း ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါ လူတွေ အကုန်လုံးဟာ အလင်းရဲ့ အလျှင်ကို တူတူပဲဆိုတာသဘောတူကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဟာ အလင်းရဲ့ သွားရာအကွာအဝေး နဲ့ အချိန်ကိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်တော့ပါဘူး ။ အလျှင်ဟာ ပကတိ ဖြစ်ပြီး အကွာအဝေး နဲ့ အချိန်ကတော့နှိုင်းရသဘောတွေဖြစ်သွား ပါပြီ ။ [ အလျှင် (ပကတိ) = အကွာအဝေး (နှိုင်းရ) / အချိန်(နှိုင်းရ) ] ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် Einstein ရဲ့ သီအိုရီဟာ အချိ်န်ရဲ့ ပကတိသဘောတရား ကို အဆုံးသတ်လိုက်တာပါပဲ ။ ခုခေတ်မှာ အနုမြူနာရီ (Atomic Clock ) တွေကို ဒုံးပျံတွေပေါ်တင် ၊ မြင့်မားတဲ့အရှိတွေနဲ့ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းမှာ ပတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး သွားခိုင်းတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အနုမြူနာရီ နဲ့ဒုံးပျံ ပေါ်က နာရီရဲ့အချိန် ဟာ အနည်းငယ်မျှ ကွာဟ နေတာကို လက်တွေ့ သိရှိလိုက်ရပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံးသွားလာနိုင်တဲ့ ၊အလင်းအလျှင်ထက် အဆတစ်သောင်းခွဲခန့် နှေးနေတဲ့ယဉ်တွေနဲ့ တောင် အချိန်ဟာနဲနဲလေး ကွာတယ် ဆိုရင် အလင်းအလျှင်ဆိုရင်တော့ အချိန်ဟာရပ်သွားမယ် ဆိုတာ ဖြစ်ကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ပကတိ အချိန် အယူအဆ ကို ပစ်ပယ် ခဲ့တဲ့ သာမန် မူပိုင်ခွင့်ရုံးစာရေးလေး တစ်ယောက်ရဲ့သူမတူထူးခြားလှတဲ့ ဥာဏ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စမ်းသပ်တွေ့ ရှိလို့ မရနိုင်တဲ့ ether ဆိုတဲ့ အရာ ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ထို့ အပြင် ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်တွေးနေတဲ့ ဟင်းလင်းပြင် (Space) နဲ့ အချိန်(Time) ကို သီးသန့် ခွဲတွေးနေတဲ့ အယူအဆ ကို လဲ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး ဟင်းလင်းပြင်-အချိန် (Spacetime) ဆိုပြီးပေါင်းစည်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
အလင်းကန်တော့ခုံးများ (Light Cones)
Maxwell ရဲ့ ညီမျှခြင်းတွေအရ ဆိုရင် အလင်းရဲ့ အလျှင်ဟာ ဘယ် ကလာလာတူတူပဲပါ ။ နေကလာတဲ့အလင်းလဲ ဒီအလျှင်ပဲ ။ ခင်ဗျား အခန်းထဲက မီးချောင်းက အလင်းလဲ ဒီ အလျှင်ပါပဲ ။ ဒီကိုသေသေချာချာတွက်ထုတ်ထားတဲ့ သုတသန ပြုမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒါကဆက်ပြီးဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲကြသလဲဆိုရင် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကအနေ အလင်းကို အချိန်တစ်ခု ၊နေရာတစ်ခု (အမှန်လေးတစ်ခု လို့ မြင်ကြည့်ပါ) ကနေပြီး တော့ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အလင်းဟာ သူ့ ရဲ့အလင်းစက်ဝိုင်းတွေအဖြစ်နဲ့ ပြန့် နှံ့ သွားပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ အရင်းအမြစ်နဲ့ က ကြီးကြီးသေးသေး အလင်းကတော့ တစ်သမှတ်နှုန်းအတိုင်းပဲ ပြန့် နှံ့ သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာပြောရရင် ရေထဲကိုကျောက်ခဲတုံးလေး ပစ်ချလိုက်သလိုပေါ့ ။ ပစ်ချတဲ့နေရာကို ဗဟိုပြုပြီး စက်ဝိုင်းလေးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြည့်နှံ့ လာပါတယ် ။ အချိန်တစ်ခု စီ မှာ ပျံ့ နှံ့ လာတဲ့ ကျောက်တုံးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးအချိန်ဆိုတဲ့လိုင်းမှာ စီချလိုက်မယ်ဆိုရင် ကန်တော့ ပုံ အလင်းခုံး တစ်ခုရလာပါတယ် ။ (ပုံ-၃ ကိုရှု ပါ) ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ဟာ ဟင်းလင်းပြင် ဒိုင်မင်းရှင်း နှစ်ခုနဲ့ အချိန်ဒိုင်မင်းရှင်းတစ်ခုကိုပဲ စဉ်းစားကြရအောင် ။
ပုံ – ၃ : အလင်း၏ ရေပွက်ပမာ ပြန့် ကားပုံ
ကျောက်ခဲရေထဲကျတဲ့နေရာလေး ကို P လို့ သတ်မှတ်လိုက်ရအောင် ။ အဖြစ်အပျက် P (ကျောက်ခဲရေထဲကျခြင်း) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေ (အချိန်အတိုင်း ရဲ့ လိုင်းတစ်လျှောက်) တွေ စုပြီးဆွဲလိုက်တော့ ကန်တော့ပုံ အလင်း ကိုရပါတယ် ။ ထို့အတူပဲအမှတ် P ကနေပြီတော့ နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ် ဆိုရင်ပြောင်းပြန် အလင်းကန်တော့ နောက်တစ်ခုကိုထပ်မံရမရှိမှာပါ .. ။ အပေါ်ပိုင်းက အလင်းကန်တော့ကိုတော့ အနာဂတ်ပြအလင်း ကန်တော့ (Future Light Cone) လို့ ခေါ်ပြီး အောက်ပိုင်းအလင်းကန်တော့ကိုတော့ အတိတ်ကာလပြ အလင်းကန်တော့ (Past Light Cone) လို့ သတ်မှတ်ပါတယ် ။ အနာဂတ် ကန်တော့ ဟာ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပြီး ကိစ္စတွေကို ဖော်ပြနေပြီး အတိတ်ကာလပြ ကန်တော့ကတော့ အဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခင်က အကြောင်းအရာတွေ ကို ဖော်ပြနေပါတယ် ။ တကယ်က လေးဘက်တိုင်းမှာဖော်ပြရမှာဖြစ်ပေမဲ့ သုံးဘက်တိုင်း (ဟင်းလင်းပြင် အတိုင်းနှစ်ခုနဲ့ အချိန်အတိုင်းတစ်ခု) တို့ နဲ့ ဖော်ပြတာ က သဘောတရားကို ပိုမိုနားလည်လွယ်စေလို့ ပါ ။ (ပုံ – ၄ တွင်ရှု)
ပုံ-၄ : အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖော်ပြသည့် ဟင်းလင်းပြင်-အချိန် ပုံ
ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ် ဆို ရင် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို သုံးပိုင်းခွဲလိုက်လို့ ရပါတယ် ။ အနာဂတ် ကာလ ပြ အလင်းကန်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်များ ၊ အတိတ်ကာလပြအလင်းကန့် တော့ မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်များ နဲ့ပြင်ပတစ်နေရာမှာ ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်များဆိုပြီးတော့ပါ ။ အတိတ် အလင်းကန်တော့ ထဲက အဖြစ်အပျက်တွေ ဟာ အဖြစ်အပျက် P ပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ရဲ့ အစုအဝေး ပါ ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် P ကိုဖြစ်စေတဲ့ “အကြောင်း (Cause)” တွေပါ ။ အနာဂတ်ကာလပြ အလင်းကန်တော့ ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကသာလျှင် အဖြစ်အပျက် P ရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရမှာပါ ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် အနာဂတ်ပြအလင်း ကန်တော့ ထဲကအရာတွေဟာ “အကျိုး (effect)” တွေဖြစ်ပါတယ် ။ အတိတ် ကော အနာဂတ်မှာ မပါတဲ့အ ဖြစ်အပျက်တွေ ကတော့ ပြင်ပတစ်နေရာဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ ရှိနေပါတယ် ။ သူတို့ ကတော့ အနာဂတ်ပြ အလင်းကန်တော့ထဲမ၀င်လာမခြင်း တော့ အဖြစ်အပျက် P ဟာ သူတို့ အပေါ်မှာသက်ေ၇ာက်မှုရှိနေဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဥပမာ နေပေါက်ကွဲမှဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။ ခုနက P နေရာမှာ နေပေါက်ကွဲမှုကိုအစားထိုးကြည့်တာပေါ့ ။ နေပေါက်ကွဲပြီးတာ နဲ့ ရှစ်မိနစ် ခန့် ထိ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘာမှခံစားရဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ဘာလို့ ဆို နေကအလင်းက ကမ္ဘာကိုရောက်ဖို့ရှစ်မိနစ် ကြာလို့ ပါ ။ ကျွန်တေ်ာတို့ ဟာအတိတ်ကာလ ရှစ်မိနစ် ကနေ ကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ နေစတင်ပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာက ပြင်ပတစ်နေရာဆိုတဲ့နေရာမှ တည်ရှိနေပါတယ် ။ တဖြည်းဖြည်း အချိန် ရှစ်မိနစ်ကြာမှသာ နေမင်းကြီးပေါက်ကွဲသွား တဲ့ အဖြစ်အပျက်ရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ခံစားရမှာပါ ။ ထို့ အတူပဲ … ကျွန်တေ်ာတို့ ဟာ ဟိုး အလင်းနှစ်ပေါင်းများစွား က အဖြစ်အပျက်တွေကို မမြင်ရသေးတာ ဟာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖြစ်အပျက်တွေ ရဲ့အနာဂတ်ပြအလင်းကန်တော့ထဲမရောက်သေးလို့ ပါ ။ အခုကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတဲ့ကြယ်တွေဟာ ပေါက်ကွဲပြီးသွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ် ။ အလင်းနှစ် တစ်ထောင်ဝေးတဲ့ကြယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်က အဲ့ကြယ်ရဲ့ ပုံကို မြင်နေရတာ ပါ ။ (အလင်းနှစ်တစ်ထောင်နေရာက အလင်းက ကျွန်တော်တို့ ဆီ ရောက်ဖို့ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် ခန့် ကြာပါတယ် ။ ) ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စကြာဝဠာကြီး ကို အတိတ် အနေနဲ့ ပဲမြင်နေရတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကကြယ်တွေကိုမြင်နေရတာပေါ့ ။ William Herschel ရဲ့ စကားနဲ့ ဆိုရင် ကောင်းကင်ပြင်က တစ္ဆေသရဲ တွေပါ့ ။ ခုလက်ရှိအချိန်မှာကြယ်တွေပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ နောင်လာမဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ က ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ သားမြေးတွေ ကမြင်ရမှာပေါ့ဗျာ ။ ကြယ်တစ်ခုပေါက်ကွဲသွားပြီထား ၊ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှု အဖြစ်အပျက့် ရဲ့ အနာဂတ်ပြအလင်းကန်တော့ထဲဝင်တဲ့အချိန် မှာ သာ အဲ့ပေါက်ကွဲမှုကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးဟာ အချိန်ဆိုတဲ့ ဒိုင်မင်းရှင်းမှာ အတူတူခရီးနှင်နေကြတာပဲ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ ။
ပုံ – ၅ : နေပေါက်ကွဲခြင်း အဖြစ်အပျက် ၏ အလင်းကန်တော့ပြပုံ
ဒီအထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ အရဆိုရင် စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးများအဖြစ်အပျက်တိုင်းမှာ ကိုယ်ဆီကိုယ်ဆီ အလင်းကန်တော့တွေဆွဲလို့ ရတာပေါ့ ။ အလင်း ရဲ့ အလျှင်ဟာ တရားသေပဲဖြစ်လို့ အဖြစ်အပျက်တိုင်းဟာလဲ တူညီ တဲ့အလင်းကန်တော့လေးတွေရှိဖြစ်နေမှာပေါ့ ။ (ပုံ-၆)
ပုံ-၆ : စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးမှ အဖြစ်အပျက်များပြ အလင်းကန်တော့ခုံးများ
ဒီလောက်ဆိုရင် အထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းလောက်တော့နားလည်လောက်ပါပြီ ။ ဒီသီအိုရီ အရ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဟာ အလင်းထက်မြန်မြန် ခရီးသွားလို့ မရပါဘူး ။ ဒီအထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ဟာ Michelson-Morley Experiment က တွေ့ ရှိလာတဲ့ အလင်း အလျှင် ဟာ တစ်သတ်မှတ်ထဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အလင်းအလျင်နဲ့ နီးကပ်စွာ သွားရင်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်မြင်သာအောင် ရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။ အောင်မြင်မှုတွေလဲအများကြီးရလာပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ သီအိုရီ မှာ ပြသနာလေးတစ်ခုတက်လာပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒြပ်ဆွဲအား(Gravity) လို့ ခေါ်တဲ့ မင်းသားကြီး ကိုထဲ့မစဉ်းစားထားပါဘူး ထည့်လဲစဉ်းစားလိုက်ကော Newton ရဲ့ဒြပ်ဆွဲအားနိယာမ နဲ့မကိုက်ညီတော့ပါဘူး ။အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကြားက ဒြပ်ဆွဲအား ဟာ ထို အရာဝတ္ထုနှစ်ခုရဲ့ ဒြပ်ထုတွေနဲ့ အကွာအဝေးပေါ်ကိုမူတည်ပါတယ် ။ [ F= G (m1 x m2 /r^2) ) ကိုမှတ်မိဦးမှာပါ ။ ] တကယ်လို့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်ကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ သွားသက်ရောက်ရမှာပါ ။ အဲ့ဒီမှာနဲနဲလေးပြသနာရှိလာပါပြီ ။ ခုနက အနာဂတ်ပြ အလင်းကန်တော့ထဲကိုမ၀င်လာခင်ကထဲကို က သွားပြီး တော့ အခြားဝတ္ထုပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမှရပါတော့မယ် ။ပြောချင်တာက နေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာဆို နေပေါက်ကွဲလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ကျွန်တော်တို့ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာစက္ကန့် မခြားပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒြပ်ဆွဲအား ဟာ အလင်းထက် နှေးပြီ့း ခရီးသွားရမဲ့ အစား အနန္တကိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ အလျှင် လောက်နဲ့သွားမှ Newton ရဲ့ နိယာမ နဲ့ကိုက်ညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ။ Einstein ဟာ သူ့ ရဲ့ အထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို Newton ရဲ့ဒြပ်ဆွဲအား နိယာမ နဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ ကြိုးစားပါတော့တယ် ။ သူ ဟာ ၁၉၀၈ ခုနှစ်က နေ ၁၉၁၄ ထိ ခြောက်နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ။ ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ သူ ဟာ ဒီကိစ္စ ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ သူ ရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ (The General Relativity Theory) ကို ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ကဲ ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို ဆက်ကြည့်ရအောင်လားဗျာ ။
ယေဘုယျရီလေတီဗတီသီအိုရီ (The General Theory of Relativity)
ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ဟာ ဒြပ်ဆွဲအား ကို ဂျီသြမေတြီ နည်းအရ ရှင်းပြတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုပါ ။ Einstein ဟာ သူ့ ရဲ့အထူးရီလေတီဗတီ မှာ Newton ရဲ့ ဒြပ်စွဲအား ကို ထည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီသီအိုရီ ကို ရရှိလာပါတယ် ။ ဒီ သီအိုရီ ရဲ့အဓိက အယူအဆ ကတော့ ဒြပ်ဆွဲအား(gravity) ဟာ ကျွန်တော်တို့နဂိုက နားလည်ထားခဲ့သလို “အား” တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒြပ်ဆွဲအားဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (Space-time) ရဲ့ကောက်ကွေးမှု ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ ။ ဘာလို့ ကောက်ကွေးရသလဲဆိုတော့ သူ့ ထဲမှာရှိနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့စွမ်းအင်တွေကြောင့်ပါတဲ့ ။အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ကြီးကို ရေမြှုပ်မွေ့ ရာ တစ်ခုလို့ မြင်ကြည့်လိုက် ။ အဲ့ရေမျြှုပ်မွှေ့ ရာပေါ် ကို သံလုံး ကြီးတစ်လုံး တင်လိုက်လို့ ရှိရင် အဲ့ မွှေ့ ရာ ကြီးမှာ ချိုင့်မသွားဘူးလား? ထို့ အတူပဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့လေးဘက်တိုင်း အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ကြီး ဟာ လဲ သူ့ အထဲမှာရှိနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ (ဥပမာ ကြယ်များ၊ဂြိုလ်များ) နဲ့စွမ်းအင် များ ကြောင့် ချိုင့်တွေဖြစ်ပြီး ကောက်ကွေးတဲ့ သဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ ဟာ နေ ကို ဘဲဥပုံ ပတ်တာဟာ ဒြပ်ဆွဲအား လို့ ဆိုတဲ့ အားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာအပါအ၀င် မည်သည့် အရာဝတ္ထုသည်မဆို အချိန်-ဟင်လင်းပြင်ထဲမှာ Geodesic ( Geodesic ဆိုတာ ကွေးနေတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အမှတ်နှစ်ခု ကြားက အနီးဆုံး အကွာအဝေးပါ ။ ပုံ-၇ တွင်ရှု ) ဆိုတဲ့ လိုင်းပေါ် က နေပဲသွားပါတယ်။ ကမ္ဘာဟာ လေးဘက်တိုင်း အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်မှာ အဖြောင့်အတိုင်း (Geodesic) အတိုင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ သုံးဘက်တိုင်း အာကာသ ကြီးမှာတော့ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့ ကောက်ကွေးမှုကြောင့် အဖြောင့်မသွားနိုင်တော့ဘဲ ဘဲဥပုံ အဖြစ် သွားနေရတာပါ ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို Stephen Hawking က ဘာနဲ့ ဥပမာပေးလဲဆိုရင် တောင်တွေအပေါ်မှာပျံသန်းနေတဲ့ လေယာဉ်ပျံနဲ့ဥပမာပေးပါတယ် ။ လေယဉ်ပျံ ဟာသုံးဘက်တိုင်းဟင်းလင်းပြင် (မိုးပေါ်မှာ) အဖြောင့်အတိုင်းပဲ သွားပါတယ် တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့အရိပ်ဟာ နှစ်ဘက်တိုင်းဟင်းလင်းပြင် (မြေကြီးပေါ်မှာ) တော့ ကောက်ကွေ့ နေတဲ့မြေကြီးနဲ့ အတူ တွန့် ခေါက်သွားသလိုပါပဲ ။ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ဟာ နေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဒြပ်ထုကြောင့် ကောက်ကွေးသွားရတယ် ။ မွှေ့ ရာပေါ်မှာ သံလုံးကြီးတင်ထားတယ်လို့မြင်ကြည့်ပါ ။ တကယ်လို့ သာ ခင်ဗျားဟာ ဂေါ်လီလုံးလေးကို အဲ့ သံလုံး ရဲ့ချိုင့်ကြီးနေရာမှာ သွားချလိုက်ရင် ဂေါ်လီလုံးလေး ဟာ သံလုံး ကို ပတ်ပြီးလည်နေမှာပါ ။ ကမ္ဘာဟာဂေါ်လီလုံးလေးလို ပါပဲ ။ လေးဘက်တိုင်း အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်မှာတော့ သူ ဟာအဖြောင့်တိုင်းသွားပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးဘက်တိုင်း ဟင်လင်းပြင် မှာ တော့ ဘဲဥပုံ သွားနေတယ်ဆိုပြီး မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ-၇ Geodesic ပြပုံ
ပုံ-၈ ကောက်ကွေးသော လေးဘက်တိုင်းတွင် နေကိုကမ္ဘာကပတ်နေပုံ
စာရွက်တစ်ရွက်ကိုတွန့် ခြေသွားအောက် ခြေပစ်လိုက် ၊ ပီးတော့ ပိုးကောင်လေးတစ်ကောင်ကို အဲ့စာရွက်ပေါ်တင်ကြည့်လိုက် ။ ပိုးကောင်လေး ဟာ စာရွက် ကြေမွနေတာကို ဘယ်သိပါ့မလဲ ။ သူလမ်းလျှောက်ရင် အဖြောင့်တိုင်းလျှောက်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး ။ ကွေ့ လိုက်စောင်းလိုက် ဖြစ်နေမှာပဲ ။ ဒါကို ပဲ သူ က မသိရင် မမြင်ရတဲ့ အားတစ်ခု က နေပြီးတော့ သူ့ ကို အဖြောင့်တိုင်းလျှောက်လို့ မရအောင် တွန်းနေတယ်လို့ သူထင်မှာပဲ ။ Newton လဲအဲ့လိုပါပဲ ။ သူဟာ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့ ကောက်ကွေးမှုကို မတွေးခဲ့လို့ဒြပ်ဆွဲအား ကို အား တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ ။ သူဟာဘယ်တုန်းကမှဒီ ဒြပ်ဆွဲအား ဆိုတာ ဘာလို့ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ Einstein က ရှင်းပြခဲ့တာပါ ။ ဒြပ်ဆွဲအား မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး နော် ။ ဒြပ်ဆွဲအားဆိုတာ အားတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ကြီးရဲ့ ကောက်ကွေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုပဲလို့ပြောတာပါ ။ ဒြပ်ဆွဲအားဆိုတာထက် ဒြပ်ဆွဲခြင်းအကျိုးရလဒ် လို့ သုံးရင် ပိုမိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ် ။
တကယ်တော့ Einstein နဲ့Newton တို့ရဲ့ သီအိုရီနှစ်ခုလုံးကို တကယ်ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းတွေကို ခန့်မှန်းပုံခြင်း က တူတူပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ Mercury ဂြိုဟ် ရဲ့ပတ်လမ်း သွေဖည်မှု ကိစ္စမှာ Newton ခန့် မှန်းထားတာနဲ့ နဲနဲလေးကွာနေပါတယ် ။ အဲ့ effect လေးဟာ မသိသာပါဘူး (အသေးစိတ်မဖော်ပြတော့ပါ) ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ Effect ကို Einstein ရဲ့ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ အရဆိုရင်တော့ ကိုက်ညီနေပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့သီအိုရီ ကို ပထမဆုံးသက်သေပြနိုင်ခဲ့တဲ့အချက်ပဲပေါ့ ။
ဒါဆိုရင် Newton ရဲ့သီအိုရီနဲ့ Einstein ရဲ့ သီအိုရီ ကိုက်သွားပီ ။ အလင်းကန်တော့ခုံး ကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။ နေပေါက်ကွဲပီးပီးချင်းမှာ ကမ္ဘာ ဟာ ပြင်ပတစ်နေရာမှာရှိနေတော့ ဘာမှသက်ရောက်မှုမရှိသေးပါ။ နေပေါက်ကွဲမှုဟာ အချိန်ဟင်းလင်းပြင်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ် ။ အလင်းနဲ့ အတူ ဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ် (ဒြပ်ဆွဲအားလို့ မသုံးတော့ပါ ။) ဟာလဲ ရှေ့ကိုထွက်လာပါတယ် ။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ကောဇောတစ်ချပ်ကိုလူလေးယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ဖက်စွန်းစီကနေ တင်းတင်း ဆွဲထားတယ်လို့ မြင်ကြည့်ပါ ။ တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ ကောဇော ကို ခါ ချလိုက်မယ်ဆို၇င် လှိုင်းတွန့် တစ်ခုပေါ်လာပါမယ် ။အဲ့လှိုင်းတွန့် ဟာဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့အချိန်တစ်ခုလိုပါတယ် ။ အဲ့လိုပါပဲ ။ နေပေါက်ကွဲမှုကို ကျွန်တော့်တို့ ဆီ အကျိုးသက်ရောက်ဖို့ ဆို ဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ် ရောက်လာမှအကျိုးသက်ရောက်မှာပါ။ အဲ့တော့ ဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ် သည်လဲ အလင်းနဲ့ အတူကျွန်တော့်တို့ ဆီကိုရောက်ပါတယ် ။ အထူးရီလေတီဗတီ မှာခန့် မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မှန်နေတာတွေ့ ရှိရပါတော့တယ် ။ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့ ကောက်ကွေးမှု ဟာ သူ့ ထဲမှာရှိတဲ့ ဒြပ်ထုတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ် ။ ထို့ အတူပဲ အထဲက ဒြပ်ထုတွေ ရဲ့ရွေ့ လျားမှုဟာ လဲ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ကိုပြန်လည်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ် ။ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ဆိုတာ Newton ယူဆထားခဲ့သလို မလှုပ်မရှားဘဲရပ်နေတဲ့ ဇာတ်ခုံကြီးတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ဇာတ်ခုံကြီးရဲ့ ရွေ့ လျားမှုကြောင့် ကပြနေတဲ့သူတွေ ပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ။ ထို့ အတူပဲ ကပြနေတဲ့ သူတွေ ရဲ့ ရွေ့ လျားမှုတွေ ဟာ လဲ ဇာတ်ခုံကြီးအပေါ်မှာတစ်ဖန်ပြန်လည် သက်ရောက်မှုရှိပြန်ပါတယ် ။
ထို့အတူပဲ အလင်းတန်းတွေဟာလဲ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ Geodesic အတိုင်း သွား ပါတယ် ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဟင်လင်းပြင် ကြီး ဟာကောက်ကွေးနေတယ်ဆိုတာတော့ သိလိုက်ရပြီ ။ အဲ့တာဆိုရင် အဲ့ဒီ ကောက်ကွေးနေတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ သွားနေတဲ့ အလင်းတန်းတွေဟာလဲ အဖြောင့်မသွားနိုင်တော့ပါဘူး ။ ဟင်းလင်းပြင် ကောက်ကွေးခြင်း ဟာ ဒြပ်ဆွဲမှု အကျိုးရလဒ် ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင် ဒြပ်ဆွဲမှု ဟာ အလင်းအပေါ်မှာ လဲ သက်ရောက်မှုရှိရမှာပေါ့ ။ Einstein ဟာ ကြယ်တွေ က နေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကိုလာတဲ့အလင်းတန်းတွေ ဟာ နေ ရဲ့ အနား ကို သာဖြတ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နားရောက်တဲ့အခါမှာ နေရဲ့ ဒြပ်ထုကြောင့် ကောက်ကွေးသွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ ကြယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မြင်ရတဲ့ နေရာဟာ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ နေရာ ကို မြင်ရတာမဟုတ်တော့ပါဘူး တဲ့ ။ ရေထဲကို တစ်ပိုင်းနှစ်ထား တဲ့ သစ်သားချောင်း တစ်ခုလိုပဲ ရှိခဲ့တယ်လို့ ထင်ရတဲ့နေရာ (Apparent Position) ကို သာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် တဲ့ ။ ပုံမှန်တော့ ဒီ ဖြစ်ရပ်ကသိပ်မသိသာဘူးဗျ .. ။ နေကလာတဲ့အလင်းကြောင့် အဲ့ကြယ်တွေကိုမမြင်ရတာများတယ် ။တကယ်လို့ခင်ဗျား က နေကြတ်တဲ့အချိန် မှာ ကြည့်မယ်ဆို၇င်တော့ မြင်နိုင်တယ်တဲ့ ။ သ်ိပ္ပံပညာ ရှင်တွေ ဟာ နေကြတ်ချိန်မှာ သေချာ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလုပ်ကြည့်တော့ Einstein ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ် ဟာ အလင်းကိုကောက်ကွေးစေတယ်ဆိုတာ အတည်ပြုလို့ ရခဲ့ပါတော့တယ် ။
ပုံ-၉းဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ်ကြောင့်အလင်းယိုင်ခြင်းပြပုံ
ခုနက ကျွန်တော်တို့ဟာ အလျှင် ကို အသုံးချပြီး အချိန်ကိုပြောင်းလို့ ရတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပြီ။ (Atomic Clock တွေ နဲ့အမြန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ ယာဉ်တွေပေါ်တင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တာ မှတ်မိမှာပါ ။ ) Einstein ဟာ သူ့ ရဲ့ ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီကနေပြီးတော့နောက်ထပ် ကောက်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ် ဟာ အချိန်ကိုပါနှေးစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ ။ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို အမြင့်တစ်နေရာက လူကကြည့်မယ်ဆိုရင် နှေးနေတယ်လို့ ထင်ရမှာပါ ။ ဘာလို့ ဆို ဒြပ်ဆွဲမှုအကျိုးရလဒ် ဟာ အချိန်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အလင်းဟာ ကမ္ဘာရဲ့ ဒြပ်ဆွဲခြင်း ကို ဆန့် ကျင်ဖက်အတိုင်း အပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့စွမ်းအင်လျော့ကျသွားပါတယ် ။ စွမ်းအင်လျော့ကျတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် သူ့ ရဲ့ ကြိမ်နှုန်း (Frequency – တစ်စက္ကန့် တွင် အမှတ်တစ်ခုအပေါ်ဖြတ်သွားသော အလင်းလှိုင်းအရေအတွက်) လဲ လျော့ကျသွားပါတယ် ။ ကြိမ်နှုန်းလျော့ ကျသွားတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အချိန်လဲမြင့်တက်သွားပါတယ် ။ ( ကြိမ်နှုန်းသည်အချိန်နဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။) အဲ့ဒီတော့ အပေါ်က လူအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာရှိတဲ့ အရာတွေ က အချိန်ပိုကြာနေတယ်လို့ ထင်ရမယ်လို့Einstein ကဆိုပါတယ် ။ သူ့ အဆိုကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ အလွန်မြင့်တဲ့ရေစင်ကြီး ရဲ့ အပေါ်နဲ့ အောက်မှာ တိကျသေချာတဲ့ နာရီနှစ်ခု ကို စက္ကန့် မလွဲအောင် တိုက်ပြီး ထားတဲ့အခါမှာ အောက်မှာ ရှိတဲ့ နာရီ က သွားတာ ပိုပြီးနှေးနေတယ်ဆိုတာ ကို တွေ့ ရပါတယ် ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု ကို နောက်ပိုင်းမှာ ပြင်ပမှာ တကယ် ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရ ပါတော့တယ် ။ ဥပမာ အမွှာညီနောင် နှစ်ယောက် ရှိတယ်လို့ မြင်ကြည့်ပါ ။ သူတို့ နှစ်ယောက် ဟာ အသက်တူတူ ပဲ ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက် ဟာ တောင်ကြီးမှာ နေပြီးနောက်တစ်ယောက် ဟာ ရန်ကုန်မှာ နေတယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးမှာနေတဲ့တစ်ယောက် ဟာ ရန်ကုန်မှာနေတဲ့တစ်ယောက်ထက် အသက်ကြီးတာပိုမြန်ရပါမယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စမှာတော့ အသက်က သိပ်ကွာသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ အလွန်ဆုံး ကွာသွားလှ မိနစ်ပိုင်းလောက်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အာကာသထဲမှာ အလင်းနီးပါးမြန်တဲ့နှုန်းတဲ့ ခရီးသွားတဲ့ကိစ္စ တွေကို တွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဟာ အရမ်းကို သိသာပါတယ် ။
Newton ရဲ့ အယူအဆတွေ ဟာ ပကတိဟင်းလင်းပြင် သဘောတရား ကို အဆုံးသတ် ခဲ့တယ် ။ Einstein ဟာ တစ်ဖန် သူ့ ရဲ့သီအိုရီတွေမှာ ပကတိ အချိန် သဘောတရား ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ ပြန်ပါတယ် ။ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ အရ ဆိုရင် အချိန်ဆိုတာ ဟာ ခင်ဗျား အလျှင်ဘယ်လောက်နဲ့ သွားနေလဲ နဲ့ ခင်ဗျား ဘယ်နေရာမှာရောက်နေသလဲ ဆိုတဲ့အရာနှစ်ခုပေါ်မှာ မူတည် ပြီးတော့ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် တိုင်းတာမှုခြင်းကွာသွား ပါပြီ ။ ဒီ သီအိုရီ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် အယူအဆ ကို တစ်ဆစ်တစ်ချိုးပြောင်းလေ စေလိုက်တာပါပဲ ။ အချိန်နဲ့ ဟင်းလင်းပြင် ကိုသီးသန့် ခွဲတွေးနေရင်း က နေ အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ဆိုပြီးပေါင်း တွေး ဖို့ အတွက် Einstein ဟာ လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ် ။ Swiss မူပိုင်ခွင့်ရုံး က စာရေးလေး ကနေ ပြီးတော့ သိပ္ပံမှာ ဘုရင်တစ်ပါးလို ဖြစ်နေတဲ့ Newton ရဲ့ အယူအဆတွေကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် မေးခွန်းထုတ် ရဲ ခဲ့တာကြောင့် ခေတ်သစ်သိပ္ပံမှာ အခြေခံတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားလဲ အဆိုတစ်ခု ကို ဟုတ်လောက်တယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုတိုင်း ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါ က ပြောလို့ ဆိုတိုင်း ယုံပြီး မနေပါနဲ့။ အဲ့အဆိုကို မေးခွန်းထုတ်ပါ ။ ရီလေတီဗတီ ကိုလဲ ပြန်မေးခွန်းထုတ်လို့ ရပါတယ် ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သံသယ ကို မထားပါနဲ့။ ဘယ်သူပြောလို့ ဆိုတိုင်း ခေါင်းမငြိမ့်လိုက်ပါနဲ့။ တစ်ချို့ ကပြောတတ်ကြတယ် ။ ငါတို့ လူတွေ ဆိုတာ ဦးနှောက်က သေးသေးလေး ၊ အဲ့ဦးနှောက်လေးနဲ့ရှေးလူကြီးတွေ ကိုမေးခွန်းမထုတ်ချင်နဲ့ ၊နင့်ဦးနှောက်လေးတစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့အာမခံချင်နဲ့ လို့ ပြောတတ် ကြပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်တွေဟာ သေးသေးလေး တွေပါ ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီသေးငယ်တဲ့ ဦးနှောက်လေးတွေနဲ့ ပဲ ကမ္ဘာကြီး ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာ မေးခွန်းထုတ်ရဲတဲ့ ၊ စပ်စုတတ်တဲ့ လူတွေ ပါ ။ Newton ၊ Faraday ၊ Maxwell ၊ Einstein အစ ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာ စပ်စုရဲ တဲ့ ၊ ရှေးရိုးတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရဲ ခဲ့တဲ့ လူတွေပါ ။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားလဲ ရှေးရိုး ဆိုတာတစ်ခုထဲနဲ့ တင် ငြိမ်မနေဘဲနဲ့ အကုန်လုံး ကို လိုက်စပ်စုပါ ၊ မေးခွန်းထုတ် ပါ လို့အကြံပြုရင်း ကျွန်တော်နဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ရီလေတီဗတီ ခရီး ကိုဒီမှာ အဆုံးသတ်ရအောင်လားဗျာ ။
Northern Light ဆိုတာဘာလဲ →